ဘေဘီလေးကို ကောင်းမွန်ပျော်ရွှင်စွာ​ကြီးပြင်းစေဖို့ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » မိဘများအတွက်လမ်းညွှန် » ဘေဘီလေးကို ကောင်းမွန်ပျော်ရွှင်စွာ​ကြီးပြင်းစေဖို့
ရင်သွေးလေးကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အရွယ်ရောက် ကြီးပြင်းစေချင်တဲ့ဆန္ဒက မိဘတိုင်းမှာရှိတတ်တဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုပါ။ ဒီဆန္ဒက ဆုတောင်းနေရုံနဲ့တော့ပြည့်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘက်ကလည်း တတ်နိုင်သမျှစွမ်းဆောင်ပေးဖို့လိုပါမယ်။ ဒီလိုစွမ်းဆောင်ပေးတဲ့နေရာမှာ အလေ့အထကောင်းလေးတွေနဲ့ ပြည့်ဝတဲ့ အာဟာရကို အချိုးကျကျပေါင်းစပ်မိဖို့လိုပါမယ်။
ဘေဘီလေးတစ်ယောက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါအကောင်းဆုံးဖွံ့ဖြိုးစေဖို့အတွက် နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့ အာဟာရတွေထဲမှာ ဗီတာမင် နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေပြည့်ဝစွာပါဝင်နေဖို့လိုပါမယ်။ ဒီတော့ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေပြည့်ဝအောင် ဘာတွေများကျွေးရမလလဲလို့များ စဉ်းစားနေပြီလား မေမေ…. ပြော​ပြပေးမှာမို့ တူတူဆက်ကြည့်ရအောင်နော်။
ငယ်တုန်းကတော့ မေမေကအာဟာရပြည့်ဝအောင်စားပြီး နို့ချိုတိုက်ကျွေးရင်ရပြီဆိုပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာချိန်မှာတော့ အာဟာရပြည့်ဝအောင် စီစဉ်ကျွေးမွေးဖို့က မေမေ့တာဝန်ဖြစ်လာပြီလေ။ ဒီတာဝန်ကိုကျေပွန်စေဖို့ဆိုရင်တော့
ပရိုတင်း– အရိုးနဲ့ကြွက်သားတွေ အကောင်းဆုံးသန်စွမ်းစေဖို့ အရေးပါပါတယ်။ ပရိုတင်းကြွယ်ဝစေဖို့ အဆီမပါတဲ့အနီရောင်အသား၊ ကြက်သား၊ ဥအမျိုးမျိုး၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ နို့တို့ကနေရရှိနိုင်ပါတယ်။
ကစီဓာတ် – ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်၊ ကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးပါ။ ထမင်း ကန်စွန်းဥ၊ အာလူး၊ ပဲအမျိုးမျိုးတို့ကနေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ရေဓာတ် – ခန္ဓာကိုယ်က ဇီဝတွင်းဖြစ်စဉ်တွေကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ရေ၊ သစ်သီးဖျော်ရည်၊ နို့၊ စွပ်ပြုတ်တို့ကနေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အမျှင်ဓာတ် – ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့ အစာခြေစနစ်ကျန်းမာစေဖို့ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဓာတ်တစ်ခုပါ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ သစ်သီးတွေ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ကန်စွန်းဥတို့ကနေရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဗီတာမင် B – ကလေးတွေကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ အရေးပါတဲ့ ဗီတာမင်တစ်ခုပါ။ ဥအမျိုးမျိုး၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ နို့၊ မုယောအားဖြည့်နို့ဖြစ်တဲ့ Bolt Malted Milk တို့တိုက်ပေးလို့ရပါတယ်။
ကယ်လ်ဆီယမ် – အရိုးနဲ့သွားတွေ၊ ကြွက်သားတွေကြီးထွားစေဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့ သတ္တုဓာတ်တစ်မျိုးပါ။ နို့၊ ဒိန်ချဉ်၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာ အများဆုံးပါဝင်နေပါတယ်။
သံဓာတ် – သွေးအားနည်းရောဂါကင်းစင်ပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းစေသလို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကောင်းဆုံးကြီးထွားစေဖို့ အရေးပါပါတယ်။ အနီရောင်အသား၊ ဥဥအမျိုးမျိုး၊ ဟင်းနုနွယ်၊ သံဓာတ်ဖြည့်စွက်ထားတဲ့ ကွေကာ၊ Malted Drink တွေကနေရရှိနိုင်ပါတယ်။
Omega-3 Fatty Acids – ကိုယ်ခံအားကောင်းစေပြီး ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ အမြင်အာရုံတွေအကောင်းဆုံးဖွံ့ဖြိုးစေဖို့အရေးပါပါတယ်။ အစေ့အဆန်တွေ၊ ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ ဥအမျိုးမျိုးတို့ကနေရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေအပြင် ဖောလိတ်၊ ပိုတက်ဆီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ဗီတာမင် A၊ ဗီတာမင် C၊ ဗီတာမင် E တို့ကိုပြည့်ဝအောင်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ကိုလည်း မေ့ထားလို့မဖြစ်ပါဘူး။
ကလေးနဲ့စကားပြောပေးတာက ကလေးရဲ့ ဘာသာစကားစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ နားထောင်မှုကလည်း ကလေးကို စကားပြောကောင်းသူတစ်ယောက်အဖြစ်ကြီးပြင်းလာစေမှာပါ။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ပေးတာက ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်မှုကိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးနဲ့ စကားစမြည်ပြောပေးပါ။
ကလေးနဲ့ အတူတူကစားပေးတာက ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးနဲ့ အချိန်ပေးပြီး ကစားပေးပါမေမေတို့ရေ…
ကလေးကို သူ့စိတ်ကြိုက်ကစားနိုင်စေထို့ အချိန်တစ်ခုပေးပါ။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်မှုက ကလေးကို စိတ်ကူးဉာဏ်ရင့်သန်စေနိုင်ပြီး ဉာဏ်ကောင်းပျော်ရွှင်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အဖြစ်ကြီးပြင်းအရွယ်ရောက်လာစေမှာပါ။ အတွေ့အကြုံသစ်တွေ စိတ်ကူးသစ်တွေကို ထိတွေ့ခွင့်ရစေနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ မိမိနဲ့အတူကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ဖို့ ကလေးကို တိုက်တွန်းပါ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်တာ ဦးနှောက်ဆဲလ်အသစ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဦးနှောက်ထဲကိုသွေးစီးဆင်းရောက်ရှိမှုကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါကျန်းမာစေဖို့အတွက် မဖြစ်မနေဂရုစိုက်သင့်တဲ့ အချက်တစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် ကလေးကိုပြည့်ဝတဲ့ အိပ်စက်ချိန်ထားရှိတတ်စေဖို့ ငယ်စဉ်ကတည်း ကပျိုးထောင်ပေးပါ။
သီချင်းနားထောင်တာက မှတ်ဉာဏ်ကောင်းစေသလို အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းလည်းကောင်းစေပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုပြေလျော့စေပြီး ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဘေဘီလေးကို ငယ်ငယ်ကတည်းက သီချင်းအေးအေးလေးတွေ နားထောင်ခိုင်းပါ။
ဘေဘီလေးတွေမှာလည်း တစ်ယောက်တည်းနေဖို့ အချိန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှ သူတို့လေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့်ဘေဘီလေးကို တစ်ယောက်တည်းစဉ်းစားတွေးတောပြီး ပျင်းနိုင်အောင်လည်း အချိန်လေးထားပေးပါ။
အခုပြောခဲ့တဲ့ ကဏ္ဍနှစ်ခုမှာပါတဲ့ အချက်လေးတွေကို မျှတအောင်လုပ်ဆောင်ပေးလို့ဘေဘီလေးကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အဖြစ် ကြီးပြင်း အရွယ်ရောက်လာအောင် ပျိုးထောင်လိုက်ကြစို့လားမေမေတို့ရေ……….
ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အသက်အရွယ်အလိုက် ဘာတွေများကျွေးမလဲ
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝင်ဘာ 19, 2019 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇန်နဝါရီ 2, 2020
Ways to Raise Healthy Kidshttps://www.onhealth.com/content/1/food_smart_kids Accessed Date 13 September 2019
40+ Parenting Tips On How To Raise A Smart Childhttps://www.raisesmartkid.com/all-ages/1-articles/1-how-to-raise-a-smart-kid-a-short-guideAccessed Date 13 September 2019
The Top 10 Healthiest Foods for Kidshttp://www.eatingwell.com/article/291139/the-top-10-healthiest-foods-for-kids/Accessed Date 13 September 2019
ဆီးတွေ အရမ်းပူတယ် ဘာကြောင့်လဲ…….
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, ကျန်းမာရေးအားလုံး, ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ, စိတ်ကျန်းမာရေး
နို့တိုက်မေမေ ငရုတ်သီးစားရင် ဘာဖြစ်မလဲ….
ခန္ဓာကိုယ် ကရေဝိတ်တွေကို ဒီလိုချပါ
ဘေဘီတို့ရဲ့ ဝမ်းချုပ်ပြဿနာ အဖြေရှာ
သကြားပြောင်းချိုချိုလေး ကပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး